MW CMC Oo Furay Shirkii Golaha Amaanka - Cakaara News
MW CMC Oo Furay Shirkii Golaha Amaanka
Jigjiga( Cakaaranews ) Arbaco, 30ka march 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka furay shirkii golaha amaanka ee deegaanka oo kaqabsoomay hoolka shirarka ee xarunta madaxtooyada.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, dhamaan hay’adaha amniga ee deegaanka oo uu ugu horeeyo wasiirka xafiiska nabadgelyada, maamulka iyo cadaalada mudane Yaasiin Cabdi Waris, gudoomiyeyaasha gobolada deegaanka, talisyada kifladoorada ciidamada difaaca qaranka koonfur bari iyo wafti balaadhan oo Somaliland kasocotay oo uu hogaaminayo wasiir kuxigeenka wasaarada arimaha dibada somaliland mudane Maxamed Yuusuf Diiriye.
Hadaba, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo si rasmi ah u furay shirkaas ayaa ugu horayn soo dhaweeyay dhamaan mas’uuliyiinta kasoo qaybgalay shirka gaar ahaana waftigii kasocotay Somaliland isagoo kahadlay dhanka abaarta ay keentay isbadalka cimilada ee roob la’aanta oo saamaysay meelo badan oo dunida ah oo ay kamid yihiin deegaankeena iyo somalilandba. Wuxuuna madaxwaynuhu sheegay inay jiraan 10 gaadhi oo calafka xoolaha deegaankeena kasoo go’ay sida oo ah deeq loo diyaariyay xoolaha xuduuda labada dhinac kunool iyo waliba xoolaha Somaliland labadaba si aysan abaartu u waxyeelaynin.
Sidoo kale, madaxwaynaha ayaa sheegay in shirka oo sii socon doona lagu lafa-guri doono ajandayaashii dhanka sii xoojinta xaalada nabadgelyada xuduudaha iyo kor uqaadida xidhiidhka labada dhinac.
Si kastaba ha ahaatee, shirkan golaha amaanka ee kafurmay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa lafilayaa inay kasoo bixi doonaan guulo wax ku ool ah oo sii xoojiya nabadgelyada iyo horumarka shacabka labada dhinac.